Allgedo.com » Imtixaankii oo usoo gaba-gaboobay iskuulada hoos yimaada Mu’asasada Al-qalam ee gobalka Gedo (Sawiro.)
Imtixaankii oo usoo gaba-gaboobay iskuulada hoos yimaada Mu’asasada Al-qalam ee gobalka Gedo (Sawiro.)
Print here| By: allgedo.com: Tuesday, June 5, 2012 // 6 Jawaabood
Garbahaarey, Somalia (AOL) – Imtixaanka sanad dugsiyeedka 2011–2012 ayaa usoo gaba gaboobay iskuulada hoosyimaado Mu’sasada waxbarashda iyo horumarinta ee Al-qalam, iskuuladaas oo kala ah: Dugsiga sare ee Amiir-nuur – G/haarey, Dugsi Hoose/dhexe ee Gogol – G/haarey, iyo Dugsi Hoose/dhexe ee Salaama oo ku yaala Tuulo Barwaaqo.
Munaasabada loogu tala galay xiritaanka iskuulada ayaa waxaa lagu kala qabtay Iskuulada Amiirnuur Secondary School, iyo Gogol Primary School, waxaana kasoo qaybgalay munaasabadahaasi: Mas’uuliyiinta Mu’asasada Al-qalam, gudiyada iskuulada, maamulayaasha iskuulada, iyo ardada labada iskuul wax ka barata.
Waxaa munaasabada xiritaanka Iskuulada ka hadlay Madaxa Mu’asasada Al-qalam Maxamed Ibraahim Xasan, waxaa uuna u hanbalyeeyey ardada, maamuleyaasha, macalimiinta iyo kormeerayaasha imtixaanka ee sida wanaagsan usoo gabagabeeyey imtixaanka. Waxaa kaloo uu talo iyo waano usoo jeediyey ardada galayso fasaxa, waxaana hadaldiisii ka mid ahaa mar uu la hadlayey arada iskuulka Amiirnuur “Ardadu waa inay ka faa’iidaysataa waqtigooda mudada ay ku jiraan fasaxa si aysan u hilmaamin daraasadii u socotay taasoo inta badan ardada ay hilmaamaan xiliga fasaxa ay ku jiraan.”
Waxuu kaloo ka hadlay ardadana uga digay inaysan duufsan da’ yarta tuuran suuqyada magaalada ee aan waxbo baran sida aadka ahna uga badan ardada waxbarata, kana digtoonaadaan akhlaaqda iyo anshaxa aan wanaagsanayn ee ay ku nool yihiin, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa “waxaad ogaataan wanaaga iyo jiritaanka umada wuxuu ku xiran yahay jiritaanka da’ yarteeda. Waa inaad ka digtoonaataan waxa dhaawacayo geedi socodka waxbarshadiina iyo waxyaabaha wax u dhimayo akhlaaqda wanaagsan iyo sharafkiina, fasaxa muhiimadiisuna waa in aad ka yar nasataan daraasadii badnayd ee aad soo marteen si ay maskaxdu u nasato iyo inaad waliba waalidiintiina ku mashquulsan khitmayntiina maalin iyo habayn u kaalmaysaan iyo inaad daraasadii lasoo dhaafay muraajacaysaan.”
Waxaa kaloo ka hadlay munaasabada madaxa maamulka Amiir Nuur Secondary School Maxamedwali Maxamuud Cigaal, ahna madaxa SEDO-G/HAAREY. Mr Wali wuxuu sidoo kale waano usoo jeediyey ardada ugana digay dhibaatooyinka faraha badan ee caqabada ku ah waxbarshada gaar ahaan wuxuu ku nuux-nuuxsaday mashaakilaadka da’ yarta maanta haysato ee ay ka mid tahay ciyaaridda ama daawashada kubada, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa “kubadu waxay noqotay mashaakilada haysato da’ yarta soomaaliyeed waxayna noqotay midlaga badbadiyey oo dhamaan qaadatay waqtigii da’ yarta, lana dhaafiyey xadkii loogu talagalay tusaale: Waqti way ciyaarayaan, waqtina ciyaartii ayay faaqidayaan oo laga sheekaynayaa sidii ay u dhacday, hadana waxaa la daawanayaa ciyaaro laga soo daayo Taleefishinada ee inta badan yurub ka socdo, isla iyadiibaa hadana laga sheekaynayaa. Waxaad arkaysaa wiil dhalinyaro ah oo intaa oo kaliya u nool. Waa maruu hurdo iyo mar uu arinkaan ku jiro.” Waxuu kaloo dhalinyarada uga digay dhibaatada uu leeyahay internetka iyo moobaylada.
Waxaa kale oo uu Maxamedwali ugu bishaareeyey ardada in ay Hay’adda SEDO, ku guda jirto dhismaha Qol la dhigi doono library loogu talagalay inay ka faaiidaystaan arada waxkabarato iskuulka, waxaa kale oo ay hay’addu keenaysaa ilaa 10computer oo loogu talagalay inay arada waxku bartaan.
340 arday oo ka wada tirsan sadexda Iskuul ayaa u fariistay imtixaanka sanad dugsiyeedka 2011-2012.
Dugsigs Hoose/dhexe ee Gogol oo ah dugsigii ugu horeeyey ee mu’asasada Alqalam aasaasto ayaa dafcadii sadexaad ka qalin jabinaysaa, halka Dugsiga Hoose/dhexe ee Salaama ay dafcadii labaad ka qalinjabinayso.
Dugsiga sare ee Amiir Nuur oo ah dugsiga sare ee kaliya ee ka jira G/haareey iyo nawaaxigeeda lana aasaasay 2007dii ayna aasaaseen urur ka shaqeeyo waxbarshada iyo hurumarka umada oo loo yaqaano SOMALI DUCATION DEVELOPMENT ONGANISATION oo marka lasoo gabiyo la yiraahdo SEDO, fadhigiisuna yahay dalka Norway.
Sanad dugsiyeedkan 2011-2012 ayaa Amiirnuur waxaa kaqalinjabinayo dafcadii oogu horaysay taniyo markii la,aasaasay. Dugsi sare ee Amiirnuur waxaa waxkabarto arada kasoo qalinjabiyo sadex dugsi hoosedhexe oo kala ah:
1) Dugsiga Hoose/dhexe ee Googol
2) Dugsiga Hoose/dhexe ee G/haarey ee ay gacanta ku hayso hay’adda NCA
3) Dugsiga Hoose/dhexe ee Salaama ee ku yaalo Tuulo-barwaaqo.
Iskuulka wuxuu leeyahay Manhaj aad u tayaysan, waxaana laga bixiyaa ilaa iyo 10 maado oo kala ah: xisaab, sadexda sayniska, taariikh (History), Jogoraafi (Geography) iyo Ganacsi (Business). Todobodaas maado waxay ku baxaan afka Englishka.
Waxaa kale oo lagu bartaa shareecada Islaamka qaybaheeda kala duwan sida: Tawxiidka, Tafsiirka, Fiqiga, Xadiiska iyo Thaqaafada Islaamka oo halmaado isku ah iyo barashada luqada carabiga sida: naxwaha, sarfiga, balaaqada, adabka oo iyagana halmaado ah kuwaas oo iyagana ku baxa afka Carabiga. Maadada 10-aad waxay ku baxdaa af Soomaali. Waxaa mardhaw la rajaynayaa in lagu daro maado 11-aad oo ah barashada computerka.
Cabdiqaadir Musdhaf, Garbahaarey/Somalia
6 Jawaabood " Imtixaankii oo usoo gaba-gaboobay iskuulada hoos yimaada Mu’asasada Al-qalam ee gobalka Gedo (Sawiro.) "
7000 thousand ayaa Puntland u fadhiisatay Imtixaanka sanadkan 2012-ka, 9200 ayaa Somaliland ufadhiistay imtixaankaas ookale. 340 ayaa Gedo u imtixaanka gashay. Maadaama Gedo ay tahay hal gobol oo aynan u dhigmin Gobolladaa isu tagay waxbadan dagaal sokeeye aan ku jirnay hadana 340 arday waa wax lala yaabo oo laga naxo, laakiin still waa arin muhiim ah inaan heyno 340 arday. Waxaan Shacabka reer Gedo ka codsanayaa inay tayeeyaan waxbarashada, joojiyaan isqabqabsiga, iyo anigaa Ugaas ah iyo Ayeeydeey ayaa Cambaro ah oo ay usoo jeestaan waxbarashada inshalahah 2015 Ardayda inay gaari doonaan kumanaan
Waa arin lagu farxo una baahan in ladhiirri galiyo oo laga qayb qaatay.
waxay ila tahay waxbarashada gobolka Gedo waxay ka hurudaa dhinaca dadka qurba joogta oo gobolka iska illoobay.
Marka walaalayaal aan dhulkeeno hormarino, Al-qalam hala taageero, si barnaamijta ay wadaan o hor mariyaan.
Walaal kooshin 340ka arday waa sadex iskuul oo garbahaarey ah laakiin waxaa hubaal ah ceeb iyo foolxumo waynahaysataa hadaan mareexaan nahay inta aan anagu isfiirinaynana horumar lama sugayo waxaa la arkay in qofku diido inuu ka qaybqaato iskuul meel laga furayo sababta oo ah re hebel ayaa dagan ama macalimiinta waxka baro ayaa ree hebel u badan buntlanta aaad ka sheekaynaysaana afka ka duwa ma gaaaraysaane waxay iska daayeen oo aanba xisaabta oogu jirirn marhaday arinku yahay horumarka deegaanka oinaysan wax qabiil ah u fiirin waxaan la soconaa ninkii mareexaan ah ee jaamacad kasoo baxaba iyaga ayaa shaqo siiyo way dhaafayaan 40 jaamici inta puntland waxka dhigo jaamacadaha iyo iskuulada dr cabdicaziiz dhakhtarkii indhaha markuu ka soo laabtay pakistaan wuxuu yimi baardheere iyo kismaayo markuu waayay cidka faaiidaysato ayaa puntland looga yeeray boosaaso guri looga dhisay naagan la siiyey waa lala socdaa dr maxamed aadam sheekh markuu kismaayo yimi isbitaal ayuu waday dhisme iyo fanba barrehiiraale ayaa cayriyey isbitaalkii waxaa laga dhisayaa oo ay socotaa dhismihiisa hargaysa waxaana loo bixiyey dr maxamed aadam sheekh naagtiisii talyaaniga ahayd ayaa ka jeexday halkaa markii kismayo laga cayrieyey xaalakanagu waa sidaas umada danteeda oo dhan waxaa la rabaa in lagu qayilo caqli kale ma jiro
aniga waxaan ka sii jeclaan lahaa in dhamaan deegaanada beelweynta Daarood dagaan oo dhan la isku xiro xaga horumarka oo ay kamidtahay wax barashada, caafimaadka iyo ganacsiga ankee siyaasada hadii ladoono maamulo kala duwan haloo sameeyo lakiin dadka walaalaha ah in qalbigooda isku fiyownaadaan ayay uga gudbi karaan wax kasta oo caqabad ku ah kadib ankee somali caawin karaan ……….
hada sidaad la socotaan Somalia kama jirto colaad beeleed ama reer hebel reer hebel duulaan ku ah taas waalaga daalay, ee kaliya waxaa ka jiro siyaasiyiin is jiirsan marka siyaasiguna inta badan asaga sidee kursi ku heshaa ayuu dadka u kala fogeeeyaa, taas waxaa looga gudbi karaa in shacabku garto midnimada faa’iidada ku jirto kadibna lagu tartamo dhanka wanaaga kan xuna la iska qabto oo aan lagu taageerin xumaanta……..
Azania hala taageero oo ayadana halaga dabo geeyo maamulada hanaqaaday ee dalka ka jiro, ninki hada aan ku guulaysan kursiga madaxweynaha ee goboladaas jubooyinka hasugto wakhtigiisa yuusan wax dumin hadaad maanta wax dumis ku raadisid kursi bari adigana ma calfaneysid kaad ka dumisay ayaa laf dhuun gashay kugu noqonaayo kadibna lamawada calfanaayo waa arinka dalkeena rogay…….Mr gaandi wakhti ha lasiiyo doorashada danbe ninki wax isku haayo ha olaleysto lakiin isku daygii kasto yaan la burburin waa iga talo …….
Waa ogahay waxaad ka hadlayso Abti, Ninka yiraa shaqo kuma lihi hadii reer hebel deegaankooda laga dhisayo iskuulka, nin waligii class fadhiistay ma’aha oo aqoonta qiimaheeda yaqaana iskuma kalsoona. Waa inaad ogaataan Iskoolka meeshii la rabo halaga dhiso, ardayda kasoo baxdaa waa gobolka horumarkiisa-Somali horumarkeeda. Saaxiib cidaan barako maleh waa inaan inteena dhalinyarada isu tagnaa oo xaalka wax ka bedalnaa.
war heedhe waxaa niiga maqan punland iyo somalilad ma uyimadan xamar waxbarasho sida jamacad halka gedo iyo bay iyo bakool iyo labada shabeela iyo kismayo caasimada xamar ugu waxbarashadon taan tan kale ilmahan oo imitixan ka ufadhiistay wa dugsiga dhehe ama hoose ee jamacad da gedo wa mid cusub ardaydana intabadan caasimaday wax barasha udontaan ee sidad uhadlaysan iyo sida wariyahaba uqoray ismalahan rer gedo dhan caasimaday uwaxbarasha tagaan madana gobalka laga dhigay gobal colaadeed